Ingabe ama-Silicone Ice Cube Trays Aphephile? | Jingqi
Ihlobo selikhona, futhi lokho kusho ukuthi uzochitha isikhathi esifanele uzama ukuhlala upholile.
Enye yezindlela ezisheshayo zokuphola kusuka ngaphandle ngaphakathi: Ayikho into efana nesiphuzo esibandayo seqhwa ukwehlisa izinga lokushisa kwakho futhi sikusize uzizwe uvuselelekile ngosuku olushisayo.
Indlela engcono yokuthola lesi siphuzo esibandayo yi-ayisikhilimu. I-Cubed, shave noma echithiwe, sekuyisikhathi eside iqhwa bekuyisikhali esingeyimfihlo yokushaya ukushisa. Uma ungazange uthenge ithreyi lekhiyubhu entsha ye-ice cube, ungamangala ngazo zonke izindlela ezikhona. Amanzi aqandayo kuwumsebenzi olula, kepha kunezinhlobo zonke zezindlela ezahlukahlukene zokwenza umsebenzi wenziwe, kusuka emathayipheni wendabuko eplastiki wendabuko kuya kubasiki be-silicone abasebasha nabakhi be-cube bensimbi.
Ingabe Amapheya e-Ice Cube Aphephile?
Impendulo emfushane: Kuya ngokuthi uyithengile nini. Uma amathala akho epulasitiki angaphezu kweminyaka embalwa ubudala, kukhona ithuba elihle lokuthi abe ne-bisphenol A (BPA) kuwo. Uma zintsha futhi zenziwe ngepulasitiki engenazo i-BPA, kufanele ulungele ukuya.
Ngokusho kweFood and Drug Administration (FDA), iBPA njengamanje itholakala emaphaketheni amaningi okudla, kufaka phakathi iziqukathi zepulasitiki kanye nama-linings amanye amathini. Le nto ingena ekudleni bese iyadliwa, lapho ihlala khona emzimbeni. Yize abantu abaningi okungenani benengxenye ye-BPA emizimbeni yabo, i-FDA ithi kuphephile emazingeni amanje ngakho-ke akukho okufanele bakhathazeke ngakho - kubantu abadala.
Izinto zanamuhla zepulasitiki zinenombolo ezansi ekutshela ukuthi luhlobo luni lweplastiki. Noma sivame ukucabanga ngalezi ngokuya ngokuthi zingaqhutshwa kabusha noma cha, lelo nani lingakutshela ngenani le-BPA elingase litholakale entweni enikeziwe. Gwema isikhunta se-ice cube neziqukathi zokugcina ukudla ezinenombolo 3 noma 7 noma nini lapho kungenzeka, ngoba yilezi ezinamandla okuqukethe i-BPA ngamanani aphezulu aphezulu. Vele, uma imishiza yakho indala kangaka ingenalo uphawu lokuphinda isebenze, cishe ine-BPA kuyo.
Isikhathi sokuthumela: Jul-27-2020